OPPO F17 - ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ် | OPPO မြန်မာ
Dynamic Orange Navy Blue
ခေတ်ရှေ့ပြေးဒီဇိုင်းဖြစ်သော ပါးလွှာပေါ့ပါးသည့်ဖုန်းကိုယ်ထည်နှင့် ပြေပြစ်သောထောင့်ချိုးအဝိုင်းပုံစံတို့ကြောင့် တစ်နေ့တာလုံး အဆင်ပြေစွာ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းကျောဘက်မျက်နှာပြင်ကို သားရေလည်သာအထိအတွေ့ခံစားမှု ရရှိအောင် ဖန်တီးထားသည့်အတွက် ထူးခြားသည့် အထိအတွေ့ခံစားမှုကြောင့် ဖုန်းကိုလက်မှ မခွာချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စောင့်ဆိုင်းရခြင်းအတွက် စိတ်ကုန်နေပြီလား။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ခံစားချက်တွေက ထပ်တူကျနေမှာပါ။
ဖုန်းအားပြည့်ဖို့ အပူတပြင်းလိုအပ်နေချိန်တိုင်းအတွက် အချိန်တိုအတွင်း အမြန်ဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်သည့် 30W VOOC Flash Charge 4.0 က သင့်အတွက်အမြဲအသင့်ရှိနေပါတယ်။ OPPO F17 ကို ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့် အားအပြည့်သွင်းနိုင်ရန် တစ်နာရီအချိန်တောင် မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
များများဆော့၊ များများပျော်ရွှင်၊ အောင်ပွဲများဆက်တိုက်ရယူလိုက်ပါ
Lag နေတာလား။သေချာပါတယ် ဒါသင့်ဖုန်းမဟုတ်ပါဘူး။
အချိန်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်းအတွက် အလျင်မြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အလွန်မြင့်မားသော ဂ်ိမ်းများကစားချိန်တွင်ပင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မမ်မိုရီကို RAM+ Anti-Lag အသုံးပြု၍ မြင့်တင်ပေးထားပါသည်။ 8GB RAM ဖြင့် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
စိတ်အာရုံတစ်ခုလုံးကို ဂိမ်းကစားခြင်းတွင် နှစ်မြှုပ်ထားနိုင်ပါပြီ
သင့်ဖုန်းက သင်ကိုယ်တိုင် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အတွေ့အကြုံများစွာကိုယူဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသိပေးချက် (notifications) များကို အောက်သို့ဆွဲချကြည့်ရှုနေရခြင်းကြောင့် အလုပ်ပိုစေမည့်အစား မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အသိပေးချက်များအား စာတမ်းထိုးပြသပေးနိုင်သည့် floating window လေးများကို ထည့်သွင်းပေးထားခြင်းဖြင့် ဂိမ်းကစားခြင်းကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စာတိုများကို ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြင်ကွင်းရှင်းရှင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာ ထိတွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း
တစ်နေ့တာလုံး သက်တောင့်သက်သာ ရှုမြင်နိုင်ခြင်း
အလင်းဆုံးမှ အမှောင်ဆုံးအထိ OPPO F17 က သင့်မြင်ကွင်းအားလုံးကို အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နေ့အချိန်တွင် အလင်းရောင်ကိုလိုက်၍ မျက်နှာပြင်အလင်းရောင်ကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးနိုင်သဖြင့် မတူညီသော အလင်းရောင်များကြား ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို အကောင်းဆုံးရှုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ညအချိန်တွင်2nits အထိ နှိမ့်ချပေးနိုင်သည့်အတွက် အမှောင်ထဲတွင်ပင် သင့်မျက်လုံးကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖုန်းကိုလက်ဖျားလေးဖြင့် တို့ထိရုံဖြင့် အလျင်အမြန်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
ပြသထားသော လက်ဗွေဖတ်သည့်စကန်ပေါ်တွင် တစ်ချက်ထိတွေ့ရုံဖြင့် လက်ဗွေကို လျင်မြန်စွာ တိတိကျကျ ဖမ်းယူပြီး အမြန်ဆန်ဆုံး ဖွင့်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်တိုင်း အများအကြားတွင် ကြွားဝါချင်စရာကောင်းလောက်အောင်
လှပသော selfie ဓာတ်ပုံ
အလှဆုံးဆယ်ဖီဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူလိုပါသလား။ သင့်ပုံရိုက်များကို အလှဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးမည့် AI Beautification 2.0 ဖြင့် အသားအရောင်များချိန်ညှိပေးခြင်း၊ သင့်မျက်နှာနှင့် လိုက်ဖက်မည့် မိတ်ကပ်ပုံစံကို အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ညအချိန် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးချိန်တွင် Night Mode ဖြင့် အလင်းရောင် နည်းနည်းမှာပင် ထူးခြားလှပသော ဆယ်ဖီဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ခံပုံရိပ်များကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်သကဲ့သို့ မျက်နှာအလင်းပြန်ခြင်းကိုလည်း Face protection ဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဓါတ်ပုံအရည်အသွေး
ကင်မရာလေးလုံးတွဲတွင် ပါဝင်သော မှန်ဘီလူးများပေါင်းစပ်မှုဖြင့် အသစ်အသစ်သော အရာများ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို မြင့်တင်လိုက်ပါ။
သင်၏ ဓါတ်ပုံအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ချဲ့ထွင်ခြင်း
ထောင့်ကျယ်ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် ရှုမျော်ခင်းများ၊ အဆောက်အဦးဗိသုကာလက်ရာများ စသည့်အခမ်းအနားဆုံးသော မြင်ကွင်းများကို ရိုက်ချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။
မြင်နေကျဓါတ်ပုံများနှင့်မတူ ခွဲထွက်ပြီး ခံစားမှုရသအသစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် မိမိဓါတ်ပုံကို ဂန္တဝင်ဆန်ဆန် ပြုပြင်ပုံဖော်ပေးခြင်း၊ အရောင်များကို ချိန်ညှိ၍ ပုံဖော်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ခေတ်ပေါ်ရေပန်းစားသည့် ပုံစံအသွင်ရရှိစေရန် ပုံဖော်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ကျယ်ဝန်းလှပသော ပင်လယ်ကမ်းခြေမှသည် နူးညံ့ချစ်စရာကောင်းသော ကလေးငယ်များအထိ မတူညီသော ရိုက်ကွင်းများစွာအတွက် အမျိုးမျိုးသော ရသပေါင်းစုံအား ပေးစွမ်းနိုင်ရန် အလိုက်ဖက်ဆုံး အရောင်အတွဲအဖက်များဖြင့် ပုံဖော်ပေးနိုင်သောကြောင့် သင်ရိုက်ကူးသော ပုံရိုက်များကို ပြင်ပကမ္ဘာကြီးနှင့်မခြား ထူးခြားတောက်ပ လှပနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Screenshots ကို အဆင်တပြေ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
လက်သုံးချောင်းကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အား ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း (Screenshots) ကို တချက်တည်းဖြင့် အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့် ဖုန်းမျက်နှာပြင်အား ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း (Screenshots) လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည့် ဖုန်းမျက်နှာပြင်အား ဒေါင်လိုက်တောက်လျှောက်ဆက်၍ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း landscape scrolling ကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Ringtone များကို DJ သဖွယ် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
Ringtone များကို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်မည့် Lab Ringtone ဖြင့် အများနှင့် မတူ တမူထူးခြားသော ဂီတသံများကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလိုက်ပါ။ ခံစားချက်နှင့် စည်းချက်များကို လိုက်ဖက်ညီအောင် သင့်စိတ်ကြိုက် ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
သင်၏ ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို အသုံးပြု၍ app များကို သော့ခတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ဖျောက်ထားခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် စပ်စုသော မျက်လုံးများရန်မှကာကွယ်နိုင်ပြီး သင်၏ အရေးကြီးသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံလုံခြုံခြုံ သိမ်းဆည်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
1. OPPO F17 တွင် အထူးနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပလပ်စတစ်အရာဝတ္ထုအား သားရေလည်သာပုံစံ ခံစားမှုအထိအတွေ့ ရရှိအောင် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သားရေအစစ် သို့မဟုတ် သားရေအတုအား အသုံးပြုထားခြင်းမရှိပါ။
2. အချက်အလက်များအားလုံးကို စမ်းသပ်ခန်းအတွင်းမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အားသွင်းရသော ကြာချိန်သည် အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်မှုရှိပါသည်။
3. 4000mAh သည်ယေဘူယျ ဆန့်နိုင်သောပမာဏဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏသည် 3920mAh ဖြစ်ပါသည်။
4. ဖုန်းမျက်နှာပြင်အလင်းအား အလိုအလျောက်ချိန်ညှိထားသော အနည်းဆုံးပမာဏမှာ ည ၉ နာရီမှ ၇ နာရီ အချိန်တွင်2nits ရှိပြီး ကျန်အချိန်များတွင် 10 nits ရှိပါသည်။ ထိုပမာဏအား ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိပါက2nits အထိ လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
5. မျက်နှာပြင်အလျားကို ဒေါင့်ဖြတ်တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ OPPO F17 ၏ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမှာ ထောင့်မှန်စတုဂံအပြည့်ဖြစ်ပါက 6.44 လက်မဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထောင့်ချိုးအဝိုင်းများပါဝင်သဖြင့် အမှန်တကယ် ရှုမြင်နိုင်သော ပမာဏမှာ အနည်းငယ်လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။
6. OPPO F17 ၏ ကျောဘက်ကင်မရာတွင် 16MP ရှိ ပင်မကင်မရာ၊ 8MP ရှိ ထောင့်ကျယ်ကင်မရာ၊ 2MP ရှိကင်မရာ တစ်လုံးစီပါဝင်ပါသည်။ မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်ကူးခြင်းကို အသုံးပြုပါက 119° ထောင့်ကျယ်မြင်ကွင်းအား 107–109° မြင်ကွင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲ ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။
7. ထုတ်ကုန်ဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် ဖော်ပြချက်များသည် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ အပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း အမှန်တကယ် ထွက်ရှိလာချိန်တွင် ဖော်ပြသော အချက်အလက်များကိုသာ ကိုးကာမှုပြုပါရန်။
8. ယခုကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်များတွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များသည် OPPO ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်းတာချက်စံညွှန်း၊ စမ်းသပ်ခန်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထံမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှန်တကယ် ထွက်ရှိလာချိန်တွင် ဖော်ပြသော အချက်အလက်များသည် စမ်းသပ်သည့် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်သည့် အခြေအနေနှင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ ဗားရှင်းပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။